Firenena 10 ambony indrindra be trosa indrindra any Afrika 2022 - Victor Mochere
Misy ny governemanta amin'ny alàlan'ny fampindramam-bola hamatsiana ireo asa isan-karazany ilaina ao anatin'izany ny fanabeazana ho an'ny daholobe, ny lalana, ny hopitaly ary ny tetikasa hafa. Ny fampindramam-bola dia zavatra tsara ho an'ny toekarena miasa raha tsy voafehy sy tsy voafehy. Tena manimba ny firenena ny mindrana rehefa ao anatin’ny fitotonganan’ny toe-karena. Ny trosa mora mivangongo dia mety ho lasa tsy takatry ny saina raha toa ka lasa avo loatra ary tsy ampy ny vola azo ao amin'ny firenena.
Ny fananana trosa dia tsy midika hoe tsy mahomby ny firenena na tsy milamina ara-bola - raha ny marina, ny sasany amin'ireo firenena matanjaka ara-toekarena lehibe indrindra dia manana betsaka amin'izany. Saingy misy tsipika tsara eo anelanelan'ny habetsahana mahasalama sy tsy salama. Ny harinkarena faobe (PIB) dia mari-pamantarana ara-toekarena mikasika ny toekaren'ny firenena iray. Noho izany, ny tahan'ny trosa amin'ny harin-karena faobe dia afaka manome fiheverana kely raha toa ka mahavita mandoa ny trosa mivoaka ny firenena.
Rehefa ambany ny tahan'ny zanabola ary mandalo fahasahiranana ara-toekarena ny firenena iray, ny fampindramam-bola dia mety ho safidy tsara kokoa ara-politika sy ara-toekarena noho ny fampiakarana hetra izay mety hampihena ny fitomboana. Na izany aza, ny fanalahidin'ny governemanta dia ny hoe ny governemanta dia tsy maintsy afaka mitantana ambim-bola voalohany (ny fihoaran'ny vola miditra amin'ny hetra noho ny fandaniana amin'ny programa) ampy handoavana izay nindramina tamin'ny fe-potoana voafaritra.
Indraindray ny vola miditra amin'ny hetra dia kely noho ny novinavinaina ary amin'ny mindrana governemanta dia afaka manonitra ny tsy fahampiana vonjimaika nefa tsy mampihena ny fandaniana. Indraindray ny tsy fahatanterahana dia tsy mihelina ary ny governemanta dia manana fatiantoka ara-drafitra. Manomboka ny voka-dratsy ateraky ny fitomboan'ny toekarena raha vao mahatratra 60% ny harinkarena faobe amin'ny harinkarena mivoatra sy manodidina ny 80% any amin'ny firenena mandroso.
Ireto ny firenena 10 manana ny tahan'ny trosa ambany indrindra amin'ny harinkarena faobe atsy Afrika.
Ny tahan'ny trosa amin'ny GDP
Firenena 10 be trosa indrindra ao Afrika 2022
Fomba fampiharana makiazy